တောင်ယာကပွဲတွင်ဒီလိုပိုက်ဆံလေးတွေ သီကာဆုချတော့ သူတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုတွေကြည့်ပြီးမိမိ၏ ရင်ထဲဝယ်
ရွာထိပ်ရှိ ပန်တုံး အောင်ပွဲခံကြသည့်နေရာ
ခန္တီးမြို့နှင့်လဟယ်မြို့အကြားဝေထိုက်ကြိုးတံတား ဦးနု လုပ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ဒီနေ့တော့ ရာသီဥတုလေးသာယာသည်မို့ စောဘွားကြီးမှ သူ့အိမ်လာဘို့ ပြောထားသည် ဆေးဘူးလေးယူကာ ရွာထဲဆင်းခဲ့တော့၏။ ဆေးဘူးဆိုလို့ အထူးအဆန်းမထင်ပါနဲ့ ပါရာစီတမော့နှင့်ဘာမီတွန်နောက်ပြီး မက်ထရို ဒီ(၃)မျိုးကို ကော်ပုလင်းထဲသို့ထည့်ကာ တအိမ်ဆင်းတအိမ်တတ် (အိုးပူ အိုးညူတို့ မိုးလိမ်းမိုး)အဘိုးအဖွားတို့နေကောင်းကြလား စသည်အော်ကာ ဆေးများလိုက်ပေးရသည့် အလုပ် မိမိမှာနေ့စဉ်အလုပ်တခုဖြစ်၏။ တခါတရံ ပရုတ်ဆီဘူးရောပါလျှက် သူတို့သည် ဘာဆိုဘာမှမသိကြ။ တချို့ခါးနာလို့ ဆေးတောင်းသည် ။ခါးနာမှာပေါ့ နေ့စဉ်ပလိုင်းလွယ်ကာ အလေးများ(ထင်းများ)နေ့စဉ်ထမ်းလို့ တောင်ယာမှနေပြီးရွာထဲသို့ သယ်ဆောင်လာရ၏။ သူတို့သည် အိမ်၌ မီးဖိုမီးမပြတ်ကြချေ။ တညလုံး ထိုမီးဖိုဘေးတွင် အိပ်ကြ၏။ထင်းများ ပလိုင်းတွင်ထည့်ကာနေ့စဉ် ထမ်းရသည့်အတွက်ကြောင့် ခါးများနာသည် မဆန်းချေ။ သို့သော် ခါးနာလို့ နှိပ်ခြင်းပြုခြင်းမရှိသည်က အခက်သား။ မိမိသည် သာသနာပြု တဲ့ သို့သော် သာသနာပြုဆိုခြင်းထက် သူတို့၏ ကျမ္မာရေးများကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုနေရသယောင်။ ခါးနာသောအဖိုးများ အားယားမှောက်စေ၏။ ပရုတ်ဆီများလိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေ၏။ ဗိုက်နာသောသူများလည်းရှိ၏။ ဗိုက်နာမှာပေါ့ ခေါင်ရည်သည် ပြောင်းဖူးကိုပြုတ်ပြီးအချဉ်ဖြစ်အောင်လုပ်သည် ဆေးတမျိုးခတ်၍ ရေနွေးမပွက်တပွက်နှင့် သောက်သည်။ ထိုဗိုက်နာသောလူများ မက်ထရိုပေးသည် ။ ခေါင်းကိုက်သောသူများပါရာစီတမော့ပေးခြင်းဖြင့် မိမိသိသမျှ ပေးဝေငှမိသည်။ ထိုအချိန်က ပါရာစီတမော့တပုလင်း ၂၅ ကျပ်ခန့်ရှိ၏။ တအိမ်မှာတော့ တောလိုက်ထွက်ရာမှ ငှက်ဖျားမိလာသည်ထင်၏။ လူတိုးစောရမ်း=အရမ်းချမ်းနေတယ် တဲ့ ။ဒေါ်မာသိုက်ဂိုး= မနက်ဖြန်လာမယ်ဟုပြောကာ နောက်တအိမ်ဆက်ခဲ့ရ၏။ ကရိုကွင်းဟု ခေါ်သောဆေး မိမိမှာမပါခြင်းကြောင့် မနက်ဖြန်မှလာမည်ပြောခဲ့၏။ ဒီလိုနဲ့ တအိမ်ဆင်းလို့တအိမ်တတ်ခဲ့ရသည်။ စောဘွားကြီးအိမ်နှင့်နီးသထက်နီးလာပြီမို့ ဘာအတွက်ကြောင့် ငါ့ကိုခေါ်ရတာလဲ ဆိုသည့်အတွေး ဖြစ်လာခဲ့၏။ မကြာခင် စောဘွားကြီးအိမ်သို့ရောက်ခဲ့ပြီပေါ့။ ဟာ ဘုန်းဘုန်း မင်းလာပြီလားတဲ့(သူသည်မြန်မာစကားအနည်းငယ်ပြောတတ်၏)အေး ကွ ငါလာတယ်လေ။ မင်းခေါ်ထားတယ်လေ။ အေးလာဆိုပြီး ထုံးစံအတိုင်းမီးဖိုဘေးသို့ ထိုင်ရတော့၏။ မီးသည် အရှိန်ပြင်းစွာတောက်လျှက် အနီးနားတွင် မီးထိုး ထမင်းချက်နေသော ခပ်ငယ်ငယ်အမျိုးသမီးတယောက် ကလေးကို နောက်ပိုးထားလျှက် အလုပ်ရှုတ်နေသည်။ မကြာခင် သိလိုက်ရ၏။ သူ့မိန်းမတဲ့။ ကဲ ရှိဦး ပြော။ သူ့နာမည်သည် စောဘွားကြီးရှိဦး ဖြစ်၏။ ငါမေးချင်တယ်လေ။ မင်းကိုတဲ့။မေးပါလေ. ဘာမေးမှာလဲ မင်းနဲ့ငါ ဘယ်သူကြီးလဲ..? မင်းမိန်းက က ဘယ်မှာလဲ..?စသည်စသည်တို့ဖြင့် မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ မေးတော့၏။ ကဲ မင်းအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ..တဲ့။ မင်းရောလို့ မိမိမှ ပြန်လည်မေးလိုက်၏။ ငါလားတဲ့ တောင်ယာအခါခုတ် ၄၀ တဲ့။ အို့…ငါက တောင်ယာအခါခုတ်၂၇ ခါ။ (၁၉၉၄)ခုနှစ်ကပေါ့။ ငါကကြီးတယ်တဲ့ စောဘွားကြီးပြောသည်။ မင်းမိန်းမရှိလားတဲ့ ..ငါ့မှာမိန်းမမရှိဘူးလို့ပြော၏။ ငါကတော့ ခု ယူထားတာ ၁၉ နှစ်တဲ့ သူက မကောင်းတော့ဘူးတဲ့ မကြာခင် ၁၆ နှစ်သမီးလေး ယူမှာတဲ့ဆိုပြီး သူ့မိန်းမရှေ့ပြော၏။အဲဒီတော့မှ ဟင်းချက်နေသော နာဂအမျိုးသမီးကြည့်မိလိုက်၏။ ခပ်ငယ်ငယ် ခပ်ချောချောလေး။ အို့ စောဘွားကြိးသည် ရွာမှာ ဥက္ကဋ္ဌထက် သူကအရာပိုရောက်၏။ မင်းမိန်းမမရှိတော့ မင်းဘယ်လိုစားလဲတဲ့..ငါ့မှာ သပိတ်နဲ့ ဆွမ်းခံစားတယ် ..ဝေဘာပယိ. ဟောက်ပယိ= ကြာက်သားဝက်သားတွေရတယ်လို့ပြောလိုက်၏။ သြော် ဆိုပြီး စောဘွားကြီးသည်အံ့အားသင့်လျှက်။ နောက်တခု မင်းညနေထမင်းစားတယ် ငါမစားဘူး လို့ပြောလိုက် .ဟာ မင်းညနေ ထမင်းမစားရင် အားမရှိဘူးတဲ့..ဆိုပြီး ပြော၏။ မိမိလည်း မရှိမဲ့ရှိမဲ့ လက်ကိုကွေ့ကောက်ပြီး အင်အားပြမိ၏.သူသည် လက်ကို လာကိုင်လျှက် မိမိလက်မှမရှိမဲ့ရှိမဲ့ကြွက်သားကို လာကိုင်ပြီးသြော် ဆိုပြီး အံ့အားသင့်ခဲ့ပြန်၏။ မိမိသည် အသက်ထက် မိန်းမမယူတာနဲ့ ညနေထမင်းမစားတာ ဤ ၂ ချက်နဲ့အနိုင်ယူမိလိုက်တော့၏။ ဘုန်းဘုန်းရေ ရွာမှာမင်းအကြီးဆုံးဖြစ်သွားပြီတဲ့။ မင်းပြီးရင်တော့ ငါနော် တဲ့။ စော်ဘွားကြီးကို ရပ်ရွာမှ တောင်ယာခုတ်ကာပေးရ၏။ စော်ဘွားကြီးကို သီးသန့် တောင်ယာထားပေးရသည် တောင်ယာခုတ်ပေးရသည်။ ဤသည်ကားတောင်ပေါ်ဒေသ၇ှိတိုင်းရင်းသားတို့၏ထုံးစံဓလေ့ဖြစ်၏။ဤသည်နဲ့မပြီးသေး နောက်နေ့ ကျောင်းသို့လာကာ လန်ကွတ်တီဝယ်ရန် ပိုက်ဆံမရှိ၍ မိမိအကြီးဆုံးဖြစ်သည်မို့ ငွေ ၅၀ လာတောင်းတော့၏။ မိမိလည်း ပေးလိုက်ပါ၏။ သို့သော် အကြီးဆုံးရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တောင်းဆိုရမည် လို့ ခံယူထားမိ၏။ ကဲ စော်ဘွားကြီး ရွာမှာ ငါအကြီးဆုံး မင်းအကြီးဆုံးတုန်းက ရွာသားတွေက တောင်ယာ ခုတ်ပေးရတယ် ငါ့ကိုလည်း တောင်ယာ ခုတ်ပေးပါလေ ဟု တောင်ဆိုလိုက်၏။ အေးပါတဲ့ နောက်မှ သိလိုက်ရသည်ကား ဘုန်းဘုန်းအတွက်ဆိုပြီး တောင်ယာ ခုတ်ပေးကြတော့၏။ မိမိ ထိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရလိုက်တော့ စာဖြေရန် မြေပြန့်သို့ ပြန်ဆင်းခဲ့ရသည်။ ပြန်တတ်ရန် မိမိ၏ မိခင်မှ ခွင့်မပြုတော့၍ နောက်သံဃာ ရယူခဲ့သည်။ ဒီနေ့အတွက် မိမိအတွက် စောဘွားကြီးအား ရပ်ရွာအကြီးဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀ ပေးကာ လှူဒါန်းလိုက်ရ၏။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 7:39 AM